Tag: maamulka | Sagal Radio Services
Guddoomiye Taabid “Qofkii qashin raba inuu meeshaan ku daadiyo wuxuu noola mid yahay Shabaab”
Sagal Radio Services • News Report • July 27, 2017
Guddoomiyaha Gobolka Banaadir ahna Duqa Muqdisho Taabid Cabdi Maxamed ayaa sheegay in cidii lagu arko, iyagoo qashin ku daadinaya goobaha aan munaasibka aheyn inay tallaabo sharci ah ka qaadayaan.
Ciidamada Puntland oo gacanta ku dhigay Shaqaalle Ajnabi ah iyo doontii ay Saarnaayeen
Sagal Radio Services • News Report • March 6, 2017
Ciidamada bada maamulka Puntland ayaa degmadda Eyl ee Gobolka Nugaal, sheegay in ay ku qabteen shaqaalle Ajnabi ah iyo doontii ay wateen.
Guddoomiyaha Gobolka Sh/dhexe oo ku baaqay dayactirka wadada isku xirta Jowhar iyo Balcad (Sawirro)
Sagal Radio Services • News Report • April 23, 2015
Guddoomiyaha gobolka Sh/dhexe Cali Guudlaawe Xuseen ayaa ugu baaqay wasaarada gaadiidka cirka iyo dhulka iyo jaaliyada gobolka Sh/dhexe ee caalamka ku nool inay ka qeybqaataan dayactir lagu sameynayo wadadka isku xirta degmada Jowhar iyo Balcad.
Guddoomiyaha Gobolka Banaadir oo qaabilay Madaxa tababarka Midowga Yurub ee Soomaaliya – sawiro.‏
Sagal Radio Services • News Report • February 27, 2015
Guddoomiyaha Gobolka Banaadir ahna duqa Muqdisho Mudane Xasan Maxamed Xuseen “Muungaab” oo xafiiskiisa ku qaabilay madaxa Tababarka Midowga Yurub ee Soomaaliya Jeneraal Massimo Mingiardi.
Warar dheeraad ah ayaa ka soo baxaayo Geerida Majaajiliistihii caanka ahaa ee Ilka Case sida u shaaciyay Maamulka dagmada Boondheere.
Sagal Radio Services • News Report • November 22, 2014
Warar dheeraad ah ayaa waxa uu kasoo baxayaa Geeridii naxdinta laheyn ee ku timid Allaha u naxariistee Cabdi Maxmed ilkacase.
Daawo sawiro:Maamulka Gobolka Banaadir oo furtay idaacad si gaar ah ugu shaqeyn doonta
Sagal Radio Services • News Report • August 29, 2014
Maamulka gobolka Banaadir ayaa markii ugu horeysay ka hirgeliyay Muqdisho idaacad gaar ah oo baahin doonta waxqabadka maamulka gobolka Banaadir.
Sawiro:Guddiga Farsamada ee Sameynta Maamulka 3-da Gobol oo xalay la shaaciyay
Sagal Radio Services • News Report • July 17, 2014
Xaflad looga dhawaaqay guddiga farsamada ee soo dhisi doona maamulka saddexda gobol ee Koonfurta-galbeed Soomaaliya ayaa xalay lagu qabtay magaalada Muqdisho, iyadoo ay ka qayb-galeen munaasabadda oo ahayd afur iyo casho madaxweynaha, ra’iisul wasaaraha, guddoomiyaha baarlamaanka iyo odayaal kasoo jeeda gobollada Koonfur-galbeed ee dalka.
Gudoomiyeyaashii degmooyinka Yaaqshiid iyo Howlwadaag oo la sheegay in xil ka qaadis lagu sameeyay
Sagal Radio Services • News Report • April 26, 2014
Gudoomiyeyaashii degmooyinka Yaaqshiid iyo H/wadaag lagu sameeyay xil ka qaadis, iyadoo ay heer gaba gabo mareyso is bedelada guud ee lagu sameynayo Gudoomiyeyaasha degmooyinka.
Maamulka Gobolka Banaadir oo ka digay in Qashinka la dhigo Hareeraha Laamiyada
Sagal Radio Services • News Report • March 16, 2014
Maamulka gobolka Banaadir ayaa ka digay in qashinka lagu shubo hareeraha waddooyinka laamiyada ah ee la dayactiray, iyadoo la sheegay in ciiddii lagu helo laga tiigsan doono sharciga.
Hogaamiyaha Maamulka Juba oo riyo ku tilmaamay shirka Lixda Gobal ee Baydhabo ka socda
Sagal Radio Services • News Report • March 7, 2014
Hogaamiyaha Maamulka KMG ah ee Jubba Axmed Maxamed Islaam (Axmed Madoobe) ayaa ku tilmaamay Maamul goboleedka looga dhawaaqay magaalada Baydhabo ee lixda Gobol ahaa inuu yahay mid Riyo ku dhisan.
Hogaanka cusub ee Maamulka Gobalka Banaadir oo sheegay in ay Kalsooni dhax dhigayaan Shacabka iyo Ciidanka.
Sagal Radio Services • News Report • March 5, 2014
Guddoomiyha cusub ee gobolka Banaadir ahna duqa Muqdisho, Jen. Xasan Maxamed Xuseen (Muun-gaab) oo shalay si rasmi ula waregay xilka mamulkaasi ayaa sheegay inay u qorsheysan tahay sidii uu kalsooni uga dhex-abuuri lahaa ciidamada iyo shacabka Muqdisho.
Gudoomiyaha dhawaan galka ah ee maamulka gobolka Banaadir oo sheegay inuu la imaanayo isbedel
Guddoomiyaha dhawaan loo magacaabay maamulka gobolka Banaadir ahna duqa Muqdisho, Jen. Xasan Maxamed Xuseen (Muun-gaab) ayaa ka sheegay kulan lagu taageerayay oo Muqdisho ka dhacay inuu isbedel weyn kusoo kordhin doono magaalada Muqdisho.
Munaasabad Lagu Maamuusayay Sanadguuradii Labaad Ee Maamulka Khatumo Oo Lagu Qabtey Minneapolis+Sawirro
Sagal Radio Services • News Report • January 20, 2014
Xaflad si heer sare ah loo soo agaasimay oo lagu xusayay Sanad-guuradii Labaad ee ka soo wareegatay aas’aaskii maamulka Khaatuma State ayaa lagu qabtay magaalada Minneapolis. Waxaana ka soo qeyb galay madaxda jaaliyadda, Aqoonyahanno, waxgarad iyo dadweyne farabadan oo ka kala yimid gobolo badan oo ka tirsan Mareykanka.
Maamulka G/Banaadir Oo Qorsheynaya Kordhinta Xarumaha Laga Bixiyo Warqadaha Dhalashada Iyo Suganaanta
Sagal Radio Services • News Report • January 6, 2014
Maamulka Gobolka Banaadir ayaa sheegay inuu balaarin doono xarumaha laga bixiyo warqadaha sugnaanta iyo dhalashada.
Dhageyso:Maamulka Gobolka Banaadir oo sheegay in lala wareegi doono dhismayaasha muhiimka ah haddii aan la dayactirin.
Sagal Radio Services • Audio/News Report • December 4, 2013
Maamulka Gobolkan Banaadir ayaa sheegay in ay la wareegi doonaan Dhismiyaasha goobaha muhiimka ku yaalla, hadii aanay Milkiiliyaasha iska lehi ku dhisin mudo sedax bilood Gudahood ah.
Maamulka degmada Wadajir oo noqday degmadii u horeysay ee dhaqaale ugu yaboohda Fatahaadaha
Maamulka degmada Wadajir ayaa noqday degmadii u horeysay ee dhaqaale ugu yabooha dadka dhibaatada ka soo gaartay fatahaadaha iyo colaadaha ka jira Gobolka Shabellaha Dhexe, kadib kulan ka dhacay Xarunta degmada.
Maamulka Juba iyo Dowlada oo ku hishiiyay in aysan soo laaban khilaafyada labada dhinac
Sagal Radio Services • News Report • November 1, 2013
Kulan saacado qaatay oo dhex maray Madaxweynaha Jamhuuriyadda Somalia Md. Xassan sheikh Maxamuud iyo Madaxweynaha Maamulka KMG Jubba Axmed Madoobe oo uu wehlinaayay Madaxweyne ku-xigeenka maamulkaasi Gen Fartaag iyo Mas’uuliyiin, Siyaasiyiin kale.
Madaxweynaha Mamaulka Puntland C/raxmaan Faroole oo ka soo horjeestay heshiis ay dowladda Soomaaliya la gashay shirkado shisheeye
C/raxmaan Faroole ayaa ka digay heshiis ay la gashay dowladda Soomaaliya shirkado shisheeye, isagoo soo hadal qaaday shidaal baaris sanad soo socda laga bilaabi rabo Soomaaliya.